ari ICO Market achachinja sei mu 2018? - Blockchain News
2017 akaona kukura putika nhamba ICOs, senzira echimurenga nzira kukwezva inivhesitimendi. gore rino 234 ICO zvirongwa vakarera kupfuura $3.7 bhiriyoni, pamwe zvikuru yakawanda chikamu zvachose mubhizimisi kuitwa kukwezvwa kubva May kusvika October, maererano Coinschedule. Nyanzvi dzinodavira kuti gore rinouya, zvisinei, ichi kuitika kuchaita kutsauka uye ICO pamusika achasangana kuchikosha rutapudzo uye kugadzirisa.
Maererano Jerry Brito, Executive Director of nonprofit sangano Coin-Center, Hurumende kuchawedzera masimba pamusoro pechiratidzo okutengesa. Gore rino iri US kuchengetedzeka uye Exchange Commission (SEC) akati rakapotsa mari kana zviratidzo zvinopiwa kana kutengeswa angava kuchengetedzeka. Kana vari kuchengetedzeka, kudzidza uye kutengeswa chaivo mari kana zviratidzo izvi mune ICO inozviisa pasi batana kuchengetedzeka mitemo. Munhau iyi, ari SEC kudare mhosva vanonyengedza uye asiri zvaidiwa mitemo vanoverengeka ICO varongi. Brito anofunga kuti dzimwe nyika, izvo kuenda kunotora Anti-vanonyengedza matanho, zvichatevera US muenzaniso.
Kudiwa chiratidzo rokutengesa kutevedza SEC mitemo, pamwe makambani’ chido chikuru chivimbo, kungaita kuti munhu mutsva chart. mu 2018, tichazoona kuti kwaita platforms kuti chipo zviratidzo itsva kuti zvichaita nani vanokwanisa zviratidzo pamberi yavari kubvumirwa atengeswe, uye zvichabatsira vanoita kuti zvandakatonga nani pamusoro pavo.
Brito anofembera kuti pakutanga, platforms izvi zvichaita chete ngaawone abvumirwa vanoita.
saka, sezvo indasitiri professionalizes, tinogona kuona kuti ICO sefuro yave kuparuka. Saizvozvo, mumwe slowdown kwaizoreva kuti pane scams inongova vashoma. Somunhu itsva mari muenzaniso, ICOs vari pano kugara.
Oliver Bussmann, muvambi uye kuronga naye pa Bussmann Advisory, purezidhendi kwete mari Crypto Valley Association uye vaimbova boka CIO uye yamaneja panguva Swiss zvemari vakabata UBS, anotenda kuti nyika ICOs vachava akura mu 2018 sezvo zvakawanda chinyakare vatambi vaite. Semagumo, vachaita mari dzavo IPO ruzivo uye unyanzvi kuti vatange pamusika itsva uye bhizimisi rose achanamatira mumwe muronga rakapfuura nyanzvi muenzaniso kukwezva upfumi.
Mumakore 12-18 mwedzi, I kutarisira pachava ICO unhu, akadai bhuku chivakwa, Pricing, startup Kukoshesa, zvichingoenda zvakadaro. Sezvo tava Wakatotanga kuona, zvingaoma kuwana mari nyore iri kumashure chena bepa. Vanoita kuda zvinoda ruzha zvirongwa zvebhizimisi uye yakakwirira kwevari pachena.
Musoro michina dhipatimendi pa Ripple, Stephan Thomas zvinowirirana nepfungwa nenharo pamusoro, maererano pambiru yake Quora (evanhu Chikuva chokugoverana ruzivo). Anoona yakawanda zvakafanana pakati ICO chinozunguzirwa nhasi uye altcoin sefungu 2014. Munhau iyi, kwokutanga hype achapa nzira kuti zvimwe zvinhu sezvazviri uye akadzikama ICO; ICOs vakawanda kuchinja kwavo nzira kukwezva inivhesitimendi. Mark Lurie zvakare anotenda kuti gore rinouya kuchava zvakawanda zvechechi guru zvose vachaenda chemhando yepamusoro muzvirongwa.
Pachava shakeout muna ICOs uye nendege kune mhando. Pachava kuwedzera ICOs apo vashoma achaenda bust. Pachava zvakawanda zvechechi guta zvose vachaenda chemhando yepamusoro muzvirongwa. Ndizvo zvakaitika panguva zvemari dambudziko ne asingashumbi guru uye kukura Nokutendeka vaitenderera, wo. Makambani Most kugona kusimudza chero mari, asi avo aigona kumutsa mari akazviita panguva here yakakwirira Kutara.
mu 2018, vakaisvochenjeresa Kutama kudivi makambani kuita ICOs uye Bitcoin-chokuita zvigadzirwa richava wean ruzhinji uye vezvenhau kubvisa “digitaalinen mari” mamiriro, sezvo Wired mishumo. Zviri dimikira kuti hausisiri zvine musoro, uye ku- munzira yokunzwisisa kwedu zvakakodzera pamusoro zvigadzirwa zvitsva kuti sechinhu mari asi chaizvoizvo haana. Asi ICO muchirongwa kuita zvikuru kuita kushandura mufananidzo indasitiri. William Mougayar, inozivikanwa Canadian Investor, entrepreneur, uye munyori wemabhuku akawanda blockchain, rinoti kuti magetsi ICO pamusika uye zviratidzo kukwezva isiri vatambi.
Kwete chete ndicho Chiratidzo 1.0 kukwezva isiri marudzi muzvirongwa, asi zviri kufarirwa isiri marudzi vanhu vanoona mikana anowana kugadzira imwe mari, kukwidza kubva revanhu uye vachivimbisa mwedzi, pamwe kuzvidavirira shoma kuitwa pamusoro. Chekutanga, tinofanira kushanyirazve uye kushandisa dzinokosha zvakagadzirwa kubva blockchain. Zvadaro tinofanira kuongorora chiratidzo functionality achitsoropodza, pasina pamusoro-Engineering chiratidzo nezvaanogona. Tinofanira kuisa blockchain kunyika mukana wokuti vanhu vanga, uye kwete chiratidzo.
Vitalik Buterin anoti pamusoro mhando itsva zviratidzo uyewo. Ndiye chokwadi kuti muna 2018-2019 itsva mhando zviratidzo, ICO 2.0, vachaonekwa zvimwe vakura ICO musika.
Pane dzimwe pfungwa dzakanaka, pane yakawanda pfungwa zvinotyisa, uye pane yakawanda kwazvo, pfungwa dzakaipa kwazvo, uye scams wandei pamwe. I kutarisira kuti zviratidzo 2.0 uye zvinhu zvose kuti vanhu vatange anovaka 2018 uye 2019 chido, kazhinji, kuva substantially yepamusoro yepamusoro. Kunyanya kamwe tatanga kuona zvakazokonzerwa sefungu zviratidzo zvokutanga vari svikiro-to-refu izwi.
Coincheck inozivisa refunds kutanga svondo rinouya
BitGo anogamuchira regul ...
Next Post:About ICO: Ndiani akaunganidzawo kupfuura mari panguva chiratidzo okutengesa